विर्तामोडको भद्रपुर रोडको निर्माण कहानी, सडकले जिम्मा लिने कि नलिने ?
By radiovision on	 April 9, 2019 BREAKING NEWS, अर्थ-वाणिज्य, प्रमुख समाचार, विचार-अन्तरवार्ता
झापाको विर्तामोडबाट चन्द्रगढी जोड्ने भद्रपुर रोड निर्माण भइरहेको छ । यो बाटो निर्माणमा एउटा खुशीको खबर छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भद्रपुर रोडको चन्द्रगढीसम्म नै ४ लेनको सडक बनाउन निर्देशन दिनु भएको छ । अहिले डिभिजन सडक कार्यालय दमकका प्रमुख श्यामकुमार यादवलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ४ किलोमिटर मात्र होइन, भद्रपुरसम्मको सडक नै चार लेनको बनाउने गरी डिपिआर तयार गर्ने र बाटो तत्काल निर्माण गर्न निर्देशन दिनु भएको छ । यो खबरले पूर्वी झापाका बासिन्दालाई आल्हादित तुल्याएको छ ।
हाल चार किलोमिटर बाटो निर्माणका लागि ठेक्का लागेको छ । यो बाटो निर्माणका विषयमा धेरैको चासो भए पनि सम्वन्धित पक्ष मौन छ । ठेक्का लिने निर्माण कम्पनी कसको हो ? प्रतिनिधि कस्ता छन् भन्ने सायदै कसैले देखेका छन् । श्री आशिष – प्रेरा जेभी नयाँ बाटो ललितपुरले ठेक्का लिएको बोर्ड निर्माण स्थलमा भए पनि उनका प्रतिनिधि छैनन् । आशिष – प्रेरा जेभीबाट पेटी कन्ट्याक्ट लिने राजकिशोर गुप्ताले केही काम गरेका छन् । तर, उनी यथार्थ बताउन तयार छैनन् । बाटोमा ढल निर्माण २०७६ असार मसान्तसम्ममा निर्माण गरिसक्नु पर्ने कार्ययोजनामा छ । कामको प्रगति हेर्दा के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । अझ ढल निर्माणपछि विर्तामोडको भद्रपुर रोडका घरको पानी नालीमा नजाने भएको छ । साइडका घरभन्दा नाली माथि बनेपछि नाली बन्नु र नबन्नुमा केही फरक देखिँदैन भन्ने स्थानीयको चासो छ । तर, त्यो कसले इस्टिमेट बनाए किन त्यस्तो भयो ? त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने पनि स्थानीयले कसैबाट बुझ्न सक्ने अवस्था छैन ।
१. ठेकेदारले डिभिजन सडक कार्यालय दमकमा बुझाएको निर्माण कार्ययोजना जिल्ला अनुगमन समिति मार्फत् झिकाई पाऊँ ।
२. बाटो निर्माणमा अनुगमनका लागि तोकिएका दमक सडकका इन्जिनियर र अन्य प्राविधिकको नाम र सम्पर्क नम्वर पाऊँ ।
३. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एक कपी स्थानीयबासीले हेर्न पाऊँ ।
४. सबै पक्षलाई बोलाएर एक पटक जिल्ला अनुगमन समितिले सार्वजनिक सुनुवाई गरोस् ।
५. विर्तावजार दक्षिण २ लेनको मात्र बाटो निर्माण गरिने भन्ने जानकारी प्राप्त भएकाले त्यताको काम रोकेर विर्तामोडको मुक्ति चोकबाट ढल तथा बाटो निर्माणको काम गराइयोस् ।
६. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पवित्र उदेश्यले चार लेनको बाटो बनाउनु भनेकाले त्यसलाई देखाएर कामलाई ढिलो गराउने षडयन्त्र नहोस् ।
अन्त्यमा जिल्लाका करिव दुई सय जना पत्रकार रहेको यो बाटोमा यति चासो राख्ताको अवस्था यो छ भने अन्य ठाउँका उपभोक्ताले सडकको काम बारे कति जानकारी पाउँछन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर डिभिजन सडक कार्यालय दमकका प्रमुख यादवले दिनै पर्ने देखिएको छ । मैले मात्र सकिन । कान्तिपुर टीभीका पत्रकार गणेशमान मुखिया, सुर्योदय टीभीका पत्रकार टीकाराम नेति, इजलास दैनिकका सम्पादक प्रदीप परियार लगायतका साथीहरु पनि बाटोको विषयमा खबर खोजीमा निरन्तर हुनुुहुन्छ । तर, सबैका लागि हात लाग्यो सुन्यको अवस्था छ । ठेकेदारलाई पटक पटक फोन गर्न सकिन्न । हामीले राज्य जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने हो । यसको सबै जिम्मा डिभिजन सडक कार्यालय दमकले लिनुपर्छ । लिन सकिन्न भने जनताको तिरोबाट तलव लिएर अल्झाउनु भन्दा छोडिदिए हुन्छ । मैले युरोप घुम्दा आधा दर्जन जति इन्जिनियर यता काम नपाएर उता सफाई मजदुर बनेको भेटेको छु । यता काम नपाएर विदेश जान खोज्ने पनि थुप्रै देखेको छु । कम्तिमा ओगटेर नवसे अर्काे काम गर्नेले अबसर पाउँछ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यु युवा हुनुहुन्छ । राजनीतिमा भविश्य छ । तपाईंबाट काम होस् । विर्तामोडको भद्रपुर रोड तोकिएको समयमा तोकिएको गुणस्तरमा सम्पन्न हुनुपर्छ । यदि यसो नभए झापाली हौं भन्नुको के नै अर्थ रहला र । आजलाई यत्ति नै । शेष फेरि । ००००००
ramesh on April 9, 2019 7:56 am
विर्तामोडको भद्रपुर रोड तोकिएको समय (२०७६ असोज २३ गते ) तोकिएको गुणस्तरमा सम्पन्न हुनुपर्छ ।